Afarta Xidig Ee Uu Ole Gunnar Solskjaer Doonayo In Uu Shaqadiisa Man United Ku Badbaadsado Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Afarta Xidig Ee Uu Ole Gunnar Solskjaer Doonayo In Uu Shaqadiisa Man United Ku Badbaadsado Oo La Ogaaday.
Manchester United ayaa xili ciyaareedkan ku jirta xaalad ka sii xun qaabkii Jose Mourinho, David Moyes iyo Louis Van Gaal ay shaqadoodii Old Trafford ku waayeen wuxuuna Ole Gunnar Solskjaer dareemayaa kulaylka kursiga kaydka ee shaqada tababaranimo ee Man United.
Ole Gunnar Solskjaer ayay kooxdiisa United soo guuldaraysatay laba kulan oo ka mid ah shantii kulan ee Premier League ugu danbeeyay waxayna kaalinta 10 aad kaga jiraan kala saraynta Premier League.
Waxay Manchester United 10 dhibcood ka hoosaysaa kaalinta afraad ee Premier League halka ay Red Devils is arkayso iyada oo haddaba hogaanka Premier League ee ay Liverpool hayso hoos uga dhacday 18 dhibcood halka ay Liverpool haysato dhibco laba jibaar ka badan kooxda ay xifiltanaan ee Red Devils.
Xogtan ayaa ah mid culays wayn ku haysa Solskjaer kaas oo Old Trafford ka badalay Jose Mourinho oo markii heerkan la marayay xili ciyaareedkii hore United u keenay 20 dhibcood.
Haddaba wargayska Standard ayaa shaaciyay in Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo in uu bisha January uu suuqa kala iibsiga ka raadsado ugu yaraan laba ciyaartoy iyada oo la shaaciyay afarta xidig ee uu ugu yaraan labada ka doonayo.
Sida xogtan lagu sheegay waxa uu Ole Gunnar Solskjaer doonayaa in suuqa bisha January ay kooxdiisu la soo saxiixato xidigaha kala ah Erling Haaland, Richarlison, Emre Can iyo James Maddison ama ay ugu yaraan laba ka mid ah helaan.
Erling Haaland ayaa ah da’yar indhaha caalamka ka yaabsaday xili ciyaareedkan wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Salzburg iyada oo ay jiraan kooxo badan oo xiisaynaya.
Emre Can oo ka shalaynaya go’aankii uu Liverpool kaga baxay isla markaana waqti ka waayay kooxdiisa Juventus ayay Man United doonaysaa in ay dib ugu soo celiso Premier League.
Xidiga kale ee muhiimka ah ee ay United doonayso ayaa ah xidiga xulka Brazil iyo kooxda Everton ee Rcharlison kaas oo qiimo sare ku jooga Goodinson Park halka James Maddison oo ka tirsan Leicester City ay United waqti badan soo doonaysay.
Haddii ay Man United laba ka mid ah hesho afartan xidig ee ay suuqa ka doonayaan ayay suurtogal tahay in ay qaybta labaad ee xili ciyaareedkan ay wax badan ku soo kordhin karaan kooxdeeda.